"မိန်းမသား တစ်​​ယောက်​အတွက်​ မလုံခြုံ​တော့ဘူးလား?" - BaHuThuTaGabar
ည ၁၀နာရီကျော်က မိတ်ေ​ဆွတစ်ယောက် မုန့်ဟင်းခါး လာစားလို့ ဖုန်းဆက်တော့ အလုပ်ကိစ္စ ပြောဖို့လည်း ရှိတော့ အာရောဂျံ မဂ္ဂဇင်းစာအုပ်ပေးဖို့ အောက်ဆင်းလာတော့ ကားလမ်းကူးဖို့ လုပ်နေတုန်း ကားတစ်စီးလာလို့ လမ်းဘေး ပြန်ရှောင်ပေးတာကိုမှန်တွေ အကုန် ချထားတဲ့ ကားနောက်ခန်းကနေ တစ်ယောက်က ချွတ်ချွတ်ဆိုပြီး နှုတ်ခမ်း ဆူပြတယ် ။
ကားကို တမင် ရပ်ပြီး ဘယ်သွားမလဲ ဘာလုပ်မှာလဲကားပေါ်တက်ဆိုပြီး ပြောတော့ Taxi ထင်ပြီးမိတ်ဆွေကားကို လက်ညိုးထိုးပြပြီး စကားနည်း ရန်စဲကားကို ပတ်ပြီး ဟိုဘက်ကားဆီ သွားပါမှအိမ်စီးကား ဖြစ်ပြီး ကားပေါ်ပါ ၄ယောက်လုံး မူးနေတာကားပေါ်ကနေ ထပ်ပြောနေလို့ အရက်မူးနေရင်လည်း ​အေးဆေးနေပါ ။
မကောင်းတဲ့ မိန်းမ မဟုတ်ဘူး …အဲ့လို မပြောပါနဲ့ ပြောတာကို နောက်က ကောင်ကစောက်ရူးမ စောက်ကြီးစောက်ကျယိဆိုပြီး ပြောတယ်တော်တော် ရိုင်းပါတယ် ။
မကောင်းတဲ့ မိန်းမ ထင်ပြီး ကားပေါ် ခေါ်လည်းမှားသွားရင် မသိလ်ုက် မသိဘာသာ မသွားပဲ ထပ်မိုက်ရိုင်းနေလို့ မူးနေရင် မိန်းမတွေကို လိုက်ရန်မရှာနဲ့ ပါးရိုက်ခံရမယ်လို့ ပြောတာကို ကားပေါ်က ဆင်းလာပြီး ယောကျာ်းနှစ်ယောက် မိုက်ကြေးလာခွဲပြီးFB cele ကောင်မပဲဆိုပြီး မှတ်မိသွားတော့မှေ–ိုးမ လို့ ဆဲသွားပါတယ် ။
199 ကို ဖုန်းဆက်ဖို့ သတိရပြီး ဖုန်းဆက်နေတုန်းကားက မောင်းထွက်သွားပြီ ဆိုပြီး ရဲစခန်း သွားရနိုးမောင်းထွက်လိုက်တော့ သူတို့ကားကလမ်းအလယ်လောက် ဘယ်ဘက်မှာ ရပ်ထားတာ199 နဲ့ ပြောနေတုန်းဆိုတော့ ကားရှိသေးတယ်ဆိုတော့ စောင့်နေပါဆိုလို့ တော်တော် လှန်းမှ ညာဘက်ချရပ်ထားတုန်း ကားမှန် လာခေါက်ပြီး ပြသနာရှာပြီးေ–ိုးမလို့ ဆဲတဲ့သူရယ်
ကားမောင်းတဲ့သူရယ်သူတို့ အပျက်မ ထင်ပြီး ကားပေါ်ခေါ်တာစတာတွေ ဆဲတာတွေ ချန်ထားပြီး ရန်ပြန်လာရှာပြီးတစ်ယောက်က ကားမှန်ချထားတဲ့ဆီကနေ ဝက်အူလှည့်နဲ့ လှမ်းထိုးပါတယ်။
ကားမှန်ကို အတင်းပြန်တင်ထားတာကို လက်နဲ့ဖိထားပြီးလှမ်းထိုးတာ အလယ် ဂီယာပေါက် နားထိနောက်ဆုတ်လိုက်လို့ လွတ်သွားပါတယ် ။
မှန်ဖိထားတဲ့ လက်ကို ဖုန်းနဲ့ ရိုက်ပြီး မှန်ပိတ်တော့ကားတံခါးက lock မချထားတော့ ဆွဲဖွင့်တာ ပွင့်သွားလို့အတင်းပြန်ဆွဲပိတ်ရပါတယ် ။
ကူကယ်ရာမဲ့ 199 နဲ့ ဖုန်းတောင် မချရသေးဘူးကားမှန်တွေ အတင်းထု ကားထွက်မယ် လုပ်တော့Bonnet တွေ အတင်း ထုပြီး ရှေ့က ပိတ်ထားပါတယ် ။
၁၅မိနစ်လောက်အတွင်းကို ကမ္ဘာပျက်မတတ်အပြင်ကနေ -ာသယ်မေ- -လိုးမတွေ စောက်ရူးမနင့်စောက်ဆင့်နဲ့ ဆိုပြီး အော်ဟစ်ဆဲဆို သောင်းကျန်းပြီး ဝက်အူလှည့်နဲ့ ထိုးဖို့ ကားအပြင်ကိုပဲ ထွက်လာဖို့စောင့်နေပါတယ် ။
သူတို့ ကားဘေးဘက်ကို ခဏထွက်သွားတုန်း ရဲစခန်းဆီ အမြန်မောင်းထွက်ရပါတယ် ။သူတို့အပြောက ကားနဲ့မလွတ်လို့ ကားရပ်တာလို့လိမ်ပါတယ် ။CCTV မှာ ကားလာလို့ လူက နောက်ဆုတ်ပေးလိုက်တာအရှင်းကြီးပါ ။
ဝက်အူလှည့်နဲ့ ကားထဲ လှမ်းထိုးလို့ အတော်ကိုshock ရနေပါတယ် ။ရဲတွေ စောင့်ပေမယ့်လည်း ဖြစ်နေတဲ့ မိနစ် ၂၀/၂၅အတွင်း ကမ္ဘာပျက်မတတ်ပါပဲ ။Video ရိုက်ဖို့လည်း သတိမရနောက်တစ်ခေါက် ကားတံခါးလာခေါက်မှရိုက်ထားဖြစ်တယ် ။တော်တော်ကို သွေးပျက်စရာကောင်းပါတယ် ။
FB cele လို့ မှတ်မိပြီးမှ ဝက်အူလှည့်နဲ့ ထိုးတာပါရဲဆီ သွားတိုင်ဖို့ လိုက်ပို့ပြီး အပြန်ကျတော့တစ်ယောက်တည်းမို့ ရဲတွေ ဆိုင်ကယ်နဲ့ပြန်လိုက်ပို့ပေးခဲ့ရတယ် ။မလုံခြုံတော့တဲ့ ဘဝအကာအကွယ်တွေ မဲ့နေသလိုပါလား 😢😢😢
Gepostet von Sai Pan Hpa am Montag, 9. September 2019